José Luis Sampedro. Kuongororwa kwemabasa ake kuburikidza nemitongo yake | Zvazvino Zvinyorwa
Kutora mifananidzo: (c) Begoña Rivas, weEl Cultural.
Nhasi ndangariro dzeanofunga uye munyori Jose Luis Sampedro. Kungoti nekuti uye kunyanya nekuda kwekubatana kwayo ne Aranjuez, iro guta randinogara. Saka panoenda imwe kuongororwa kwemabasa avo kuburikidza nemitsara yavo, vamwe nezve maitiro ekusika, vamwe nezve kunyora zvese.
2 10 anoshanda uye yavo yekugadzira maitiro
2.1 Congress muStockholm
2.2 Rwizi rwunotitora
2.3 Gumiguru, Gumiguru
2.4 Etruscan kunyemwerera
2.5 Mermaid yekare
2.6 Nzvimbo Yemambo
2.7 Anoda ngochani
2.8 Gungwa kumashure
2.9 Quartet yemuimbi
Kutenda kwangu ndekwekuti kunyora kuri unozvichera, uve anochera matongo, pinda mune imwe, "pinda zvakadzika mukati megwenzi."
Chokwadi, Ini handizive chaizvo kuti sei munhu akazvipira kunyora, kuti munyori anozvarwa sei mumunhu.
Mumanoveli angu zviitiko, zvese zvakagadzirwa uye zvinozivikanwa, ndezvechokwadi kwandiri, Ndinogara mavari uye mavari ndinofamba. Kunyangwe hazvo ndichitaura nezveguta rinozivikanwa ini ndinoripfuura nesefa yezviitiko zvangu uye zvakasiyana neguta rinozivikanwa nevamwe.
Kunyora kuri kurarama. Kurarama kuri kufamba. Nezve ndangariro. Nekufungidzira. Kubudikidza nema geographies ayo rimwe zuva takafamba, iro rimwe zuva isu takafungidzira.
10 anoshanda uye yavo yekugadzira maitiro
Pfungwa iyi yakauya nekuuya kwandakaita pa banking kongiresi, yakashandurwa ikave yenhau mumusangano wesainzi nekuti zvinoita kunge inonakidza kwandiri kupfuura iyo purofiti uye yekurasikirwa manhamba.
Ini ndakanyora novel pasi pe kukanganisa kwezviitiko zvinonakidza zvandakaunzwa neSweden: iyo nzvimbo yeScandinavia (mvura, masango, nyanza) yakandifadza, ndakashamiswa. Uyezve rusununguko rwehupenyu.
Muchirimo chemakumi matatu isu taienda nechikwata chebhasikoro ku kugeza murwizi rweTagus. Rimwe zuva rakanaka, patakaenda kunogeza takasangana nerwizi parquet, irwo rwaizobuda makore akazotevera Rwizi rwunotitora.
Nyora inoverengeka zvakanditorera makore mapfumbamwe nekuti, kunze kwemabasa mazhinji, kuzvinyora ndega ndakazvitsaurira kutenderera nyika idzi, kukanda bheseni rerwizi rweTagus, nzira yegancheros.
Zvakanditorera makore gumi nemapfumbamwe kunyora Gumiguru, Gumiguru. Mumakore ese iwawo ndakaona kuti inoverengeka yenyika. Pandakaipedza, murwi wemapepa, akataipa neni uye andichine, waive mita imwe uye gumi mainji.
Pamanovhero angu ese chete, Etruscan kunyemwerera, Ini ndinogona kutsanangura chaizvo iro zuva, nguva mariri marakaberekwa uye chiitiko chakarikurudzira. Kuzvarwa kwemuzukuru wangu iyo inoverengeka yakafuridzirwa nechisikwa chidiki ichi yakave chiitiko chekunyora.
Iyi novel inozvarwa kubva pakuverenga kwangu kweiyo Sappho nhetembo, kunyanya mufananidzo wejaya rakapererwa rinozvikanda mugungwa nekuda kwekusadiwa newaaida.
Iyo inoverengeka yakakura kupfuura makore makumi mana nekuti ndizvo inoverengeka yaAranjuez. Ini ndaida kuinyora kare kare, asi iyi haisi bhuku remunyori mudiki.
Anoda ngochani pamusoro pezvose a kuchema kwerusununguko zvachose uye rusununguko rwepabonde kunyanya. Iyo yakanaka muenzaniso yechakavanzika, isingatsanangurike chikamu chechisiko.
Ini ndainyatso chengeta mutauro nenzira yema libertine eFrance, ndakanyatso chengetedza kubhadhara nemutauro wakasarudzika nekuda kwehutsinye hwezvakataurwa chokwadi. Kuda kana kwete hapana anogona kuratidzika seane hunhu.
ari tales de Gungwa kumashure vanoteerera chirongwa chekuyedza kupa "dudziro", mumhando dzevanhu, nezvezvakasiyana zvatinoshamwaridzana nemakungwa akasiyana.
Maitiro angu mukunyora mitsara iyi ndeayo mukomana mudiki uyo, achitamba pamhenderekedzo yegungwa, anowana goko reparera pajecha ndokumhanyira kuna amai kuti vamupe pfuma inozvininipisa.
Tinogona kutaura nezveruzivo rwekufunga kana rondedzero yekunyepedzera, ngano yetsika kana ngano yefilosofi. Chero zvazvingaitika, iyo kurevererwa kwenzanga irinani pamberi penyika isina kutendeka kuhunhu hwayo hapana mubvunzo kuti iyo yepakati axis.
mabviro: Shamwari dzaJosé Luis Sampedro Association.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » José Luis Sampedro. Kuongororwa kwemabasa ake kuburikidza nemitongo yake
Mabhuku akanakisa emabhuku eCuba